စိတ်ကူးတည်ရာ ...: ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်
Ma Kyaw and Thet Tun shared မယ် ပိုး's photo.
MBAအတန်းသားတွေကို Marketingအကြောင်း စာသင်နေတယ်..
Marketing Strategy ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်.. ဘာက ဘယ်လိုဆိုတာကို စာတွေ့တင် မဟုတ်ဘဲ မျက်လုံးထဲ ကွင်းခနဲ ကွက်ခနဲ မြင်ပြီး သဘောပေါက်သွားအောင် စာအုပ်ထဲက သီအိုရီတွေကို ပါတီပွဲက ကောင်မလေး အကြောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောပြလိုက်တယ်..
"မင်းတို့ ပါတီပွဲတစ်ခုသွားတာ.. အဲဒီမှာ ငယ်ငယ်လှလှ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့..
♥ 1. မင်းက ချက်ချင်းသွားပြီး "ငါက ချမ်းသာတယ်.. ငါ့ကို လက်ထပ်ပါ.." လို့ ပြောလိုက်တာ..
တိုက်ရိုက်စီးပွားရေး Direct Marketing လုပ်လိုက်တာပဲ..
♥ 2. အကယ်၍များ မင်းကိုယ်စား မင်းသူငယ်ချင်းက အဲဒီကောင်မလေးဆီသွားပြီး.. "ဒီကောင်က သိပ်ချမ်းသာတာ.. မင်း သူ့ကို လက်ထပ်ပါလား.." လို့ ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့..
ဒါ ကြော်ငြာအားကိုးတာ.. Advertising ပေါ့ကွာ..
♥ 3. အဲဒီလိုတွေမှ မဟုတ်ဘဲ.. ကောင်မလေးက မင်းအနားကို လျှောက်လာပြီး.. "ရှင်က သိပ်ချမ်းသာတာပဲ.. ကျွန်မကို လက်ထပ်မလား.. " လို့ မေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့..
ဈေးကွက်မှာ ကိုယ်က Brand Recognitionရနေပြီ.. နာမည်ရ Branded ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေတာလေးတွေ ဝိုင်းနေတဲ့ သဘောပဲ တပည့်တို့ရေ....
♥ 4. နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုကတော့ကွာ..
ကောင်မလေးအနားသွားပြီး.. "ကိုယ်က အရမ်းချမ်းသာတာကွ.. မင်း ကိုယ့်ကို လက်ထပ်မလား.." လို့ မေးတာမှာ ပါးအရိုက်ခံလိုက်ရရင်တော့..
ဒါက သူ့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုပေါ့ကွာ.. Customer Feedbackဆိုတာ ဒါမျိုးကွ.. အခန့်မသင့်ရင် ပါး၂ဖက်လုံး ယောင်သွားမယ်..
♥ 5. မင်းက ကောင်မလေးကို "ကိုယ့်ကို လက်ထပ်မလား.. ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုက တော်ရုံမဟုတ်ဘူးနော်.." လို့ ကြွားကောင်းတုန်းရှိသေး.. သူက သူ့ယောက်ျားခေါ်ပြီး မင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်တော့..
ဈေးကွက် ဝယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား.. ချိန်ခွင်လျှာ တစ်ဖက်စောင်းနေတဲ့သဘောပဲပေါ့ကွယ်.. Market Demand and Supplyက ညီဖို့ ခက်တာကိုးကွ..
♥ 6. နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်မျိုးက... မင်းမှာ ကောင်မလေးအနား ကပ်ပြီး "သိပ်ချမ်းသာတဲ့ ကိုယ့်လိုလူမျိုးကို မင်းလက်ထပ်မလား.." လို့တောင် မေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး မရလိုက်သေးခင်မှာဘဲ.. မင်းရဲ့ မိန်းမက မင်းအနားကို ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့...
ဈေးကွက်သစ် ဝင်ရောက်မယ့် မင်းရဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေ အကုန်ရေစုန်မျောပြီဆိုတာ သိလိုက်သင့်ပြီ.. ဒါမျိုးက Restriction from Entering New Marketပဲ.. အလုပ်မစခင် ပြဿနာအရင်ရှင်း.. ပြဿနာမှ မရှင်းနိုင်ရင် အလုပ်မစနဲ့တော့ဆိုတာ သိထားတော့ပဲ.. "
ဒီလောက်ဆိုရင်.. Marketing Strategyက ဘာဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိကြရောပေါ့.. ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အတန်းဆင်းပြီကွယ်..
(ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဟာသလေးတစ်ခု.. ဘာသာပြန်ထားတာပါ.. ) :P
Posted by lu bo at 7:34 PM
I Love Twilight (4)
ခင်မောင်တိုး - Discography
Sunday, September 9, 2012 http://axeltkw.blogspot.com.au/2012/09/discography.html မှ . All Songs and Cover Art Credit t...
အလှဆုံးမှ ဘ၀တုံးရသည့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
January 1, 2013 ရက် ၊ 2:43 တွင် ချမ်းငြိမ်း ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။ ဟိုး....... ရှေးရှေးတုန်းကပေါ့။ ငှက်တွေရဲ့ ဘုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် စာတစ်စောင် - မသီတာ (စမ်းချောင်း )
၁၀.စာအုပ်စဉ်ပြတိုက် စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဖတ်သင့်သောစာအုပ်များအနက် ဤစာအုပ်လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်းယူဆမိပါသည်။ စာဖတ်ပျ...
တစ်နေ့မှာ ... မြန်မာတစ်ယောက်၊ ထိုင်းတစ်ယောက် နဲ့ အမေရိကန် တစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်ထဲမှာ သေဆုံးပြီး တမလွန်ရောက်သွားကြတယ်။ တမလွန်တံခါးဝမှာ ...
ဝီရိယစိုက်ထုတ်ရန် နေရာကို ပြသောသူကို ________ဟုခေါ် သည်။
Win Zaw တစ်ခါတုန်းက မောင်မောင်နဲ့အောင်အောင်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာကြီး တစ်ဦးထံကို ပညာသင်ဖို့ အတူတူသွားကြတယ်။...
ခင်ဂျူး သည် သြဂုတ်လ 14, 2012 တွင် 11:30am အချိန်၌ရေးသားခဲ့သည်
Mr Bean at the Swimming Pool -- Mr Bean im Schwimmbad
မုန့်ဟင်းခါး ပုံပြင် . . .
ရေးမိရေးရာလေးများ နံနက်ဝေလီဝေလင်း နာမည်ကြီး မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ လူတွေပြည့်ကျပ်လို့နေတယ် “မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ ပဲကပ်ကြော်နဲ့…”...
Myanmar Funny Fight New 2013.
ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါ...
မြန်မာ - အင်္ဂလိပ်စကားပုံများ
Mr. Jugger Blog
Cali For Life